काेराेना संक्रमितले डुलेका स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन्- शंकास्पद क्षेत्र सिल गरेका छौँ (अन्तर्वार्ता)
नवराज कुँवर उदयपुर, ६ वैशाख
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्के मस्जिदमा बसेका १२ जना भारतीय नागरिकमा कोरोना पुष्टि भएपछि प्रदेश १ र २ मा त्रास बढेको छ । प्रदेश १ का उदयपुरसहित, सुनसरी, मोरङ, झापा र प्रदेश २ का सप्तरी र सिरहामा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेका छन् । ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेर्दा कोरोना संक्रमित १२ भारतीय नागरिक विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट गत फागुनमै नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
यसअघि वीरगन्जमा भेटिएका संक्रमितसँगै उनीहरू सुनसरी र सप्तरीका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको छ । उनीहरू मोरङ, सुनसरी हुँदै सप्तरीको बोदेबरसाईन, राजविराज, फत्तेपुरलगायतका ठाउँमा पुगेर इस्लाम धर्मको प्रचार गर्दै हिँडेका थिए । यसै क्रममा २६ फागुनमा उनीहरू उदयपुर प्रवेश गरेको देखिन्छ । फागुन ३, ४ र ५ गतेसम्म सप्तरीको वोदेबरसाईन नगरपालिका– ५ जाँजरमा भएको धार्मिक सम्मेलनमा सहभागी भएर सप्तरीकै सप्तकोशी नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डगढी हुँदै भुल्के मस्जिद पुगेका थिए । यसरी धेरै ठाउँमा पुगेका उनीहरूबाट अरुलाई पनि संक्रमण त भएन ? खासगरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा धेरैको डर यही छ ।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित नगरपालिकाले के गर्दैछन् ? नागरिकलाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदैछन् ? शिलापत्रकर्मी नवराज कुँवरले उदयपुरको त्रियुगा र चौदण्डगढी नगरपालिका तथा सप्तरीको सप्तकोशी र बोदेबरसाईन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका छन् :
मस्जिद क्षेत्रका स्थानीयको आरडीटी आजै गर्छौं
बलदेव चौधरी, नगरप्रमुख, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलको निष्कर्ष के हो ?
नगरपालिकाका केही क्षेत्रका स्थानीयवासीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवश्यक किट केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ । हामीले माग गरिसकेका छौं । आजै दिउँसो प्रदेशले आरडीटी गर्ने करिब एक सयवटा किटसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाउने भएको छ ।
कोरोना पुष्टि भएका १२ जना राहत बाँड्दा जनप्रतिनिधिसँग समेत सम्पर्कमा आएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधि पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा के हो ?
होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो हिसाबले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज नै हो । तर, जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमितको सम्पर्क गएका छैनन् ।
स्वाब नमूना दिएर मस्जिदभित्र बसेका भारतीय नागरिकको गतिविधिप्रति नगर सरकारले ध्यान दिएको पाइएन । यो त तपाईंहरूको लापरबाही भएन र ?
त्यस्तो होइन । हामीले त लकडाउन अघि नै मस्जिदलाई सिल गरेका हौँ ।
स्थानीयवासीका अनुसार मस्जिदमा दुई दिन अघिसम्म कोरोना पुष्टि भएका १२ जनाले ४० जनाको समूहमा नमाज पढिरहेका थिए । आउजाउ पनि भइरहेको थियो । स्थानीयवासीले ढाँटेका हुन् त ?
मस्जिद सिल गरे पनि लुकीछिपी त्यहाँ आउजाउ भएको रहेछ । तर, ठूलो संख्यामा होइन, एक/दुई जना आउने/जाने गरेका रहेछन् ।
मस्जिदभित्रको क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित थिएन भन्छन् त ?
त्यस्तो होइन । स्वाब नमूनाको रिपोर्ट नआउँदासम्मका लागि हामीले त्यहाँ बस्न भनेका थियौँ । रिपोर्ट आएलगत्तै विराटनगर पठाइसकेका छौँ ।
मस्जिद रहेको क्षेत्रमा अरु कसैलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको छ ?
अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी छैन । कोरोनाको लक्षणजस्तो लाग्ने गरी कोही बिरामी भएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा भुल्के क्षेत्रका स्थानीयवासीको आरडीटी गर्छौँ । सुरक्षा सतर्कता बढाउँछौँ । नगरवासीलाई घरबाहिर ननिस्कन भनेका छौँ । पहिलेभन्दा अझै सतर्क भएर कोरोना भाइरसविरुद्धका गतिविधि अघि बढाउछौँ ।
हामी चनाखो भएर काम गरिरहेका छौँ
खगेन्द्र राई, नगरप्रमुख, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर भुल्के मस्जिदमा कोरोना पुष्टि भएकाहरू १२ जना चौदण्डगण्डी नगरपालिकाकै शिवाई मस्जिद हुँदै गाइघाट पुगेका रहेछन्, यहाँ कस्तो सतर्कता अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?
म केही बेरअघि ५ नम्बर वडामा पर्ने उक्त मस्जिद, वरिपरिको बस्ती र मुस्लिमहरूको बाहूल्यता रहेको ९ नम्बर वडामा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे बुझेर आएँ । सबैलाई घरभित्रै बस्न भनेका छौँ । कोरोना पुष्टि भएका १२ जना शिवाईस्थित मस्जिदमा आएका रहेछन् । तर, उनीहरू धेरै मानिसको सम्पर्कमा आएनन् । मैले त्यहाँका स्थानीयसँग प्रश्नोत्तर नै गरेँ । १२ जना आए, आफैंले खाना पकाए, खाए र गाइघाटतिर गएका रहेछन् ।
ती १२ जनाकै कारणले चौदण्डीगढीमा जोखिम छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । भुल्केमा १२ जना कोरोना पोजेटिभ हुनु भनेको पूरै मुलुकका लागि जोखिम हो । हामी त जिल्लाकै अंग हौँ, जोखिम नहुने कुरै छैन । ती १२ जनाले नगरपालिकाभरी नै कोरोना सारे भन्ने सन्देश जारी गरी भएको हल्लामा चाहिँ सत्यता छैन भन्न खोजेको हुँ ।
शिवाई मस्जिदमा चैत पहिलो साता भारतबाट आएका अरु भारतीय नागरिक पनि छन् भनिन्छ नि ?
शिवाईमा भएका ५/६ जना भारतीय नागरिक भाइको छोरीको बिहेमा ८ चैतमा आएका रहेछन् । तर, ११ चैतमा लकडाउन भयो र उनीहरू थुनिए । उनीहरूले भारत फर्किन नचाहेका भने होइन । बरु दुई/चार भाटा खान तयार छौं तर, हामीलाई बोर्डरसम्म पुर्‍यादिनु भनिरहेका छन् । तर, मैले अहिले मिल्दैन, जहाँ छौ, त्यही सुरक्षित बस्नु, बाहिर ननिस्कनु भनेको छु ।
उक्त क्षेत्रमा कति परिवार मुस्लिम छन् ?
चौदण्डगढी नगरपालिकाको ५ र ९ मा गरी मुस्लिम समुदायका ३५ परिवार छन् ।
भनेपछि अहिले मस्जिद रहेको क्षेत्र र बस्ती सुरक्षित छ ?
त्यसो भन्न सकिन्छ । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने वा भनौं कोरोनाजस्तो लाग्ने लक्षण कसैमा पनि देखिएको छैन । लामो समयदेखि हामीले विभिन्न माध्यमबाट नगरवासीलाई सजग गराउने काम गरिरहेका छौं । नगरवासी आफैं पनि सचेत छन् । प्रदेशले पठाएको स्वास्थ्यकर्मीको टोली भुल्केपछि हामीकहाँ आउँदै छ । मस्जिद क्षेत्रका कतिपयको आरडीटी चाहिँ गर्छौँ ।
हामी डराएका छैनौं
आतेशकुमार सिंह यादव, नगरप्रमुख, बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी कोरोना पोजेटिभ देखिएका १२ भारतीय नागरिक तपाईंहरू नगरपालिका हुँदै आएका रहेछन् । नगरवासीको सुरक्षाको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ती संक्रमित हाम्रो नगरपालिकामा आएको धेरै लामो समय भइसक्यो । उनीहरू गत फागुनको ३, ४ र ५ गते वडा नम्बर ५, जाँजरमा भएको धार्मिक सम्मेलन इज्तिमा सहभागी हुन आएका थिए । अहिले हामी वैशाख महिनामा छौँ । त्यसैले उनीहरूलाई लिएर हाम्रो नगरपालिकावासी डराउनुपर्ने स्थिति त छैन । तर पनि सतर्कता त अपनाउनै पर्छ । हामी सजग छौँ । नगरवासीलाई सजग गराइरहेका छौँ ।
नगरपालिकाभरी कतिवटा मस्जिद छन् ?
१५/१६ वटा छन् ।
यहाँ मुस्लिमको जनसंख्या अलि बढी भएको र धार्मिक सम्मेलन र त्यसको केही समयसम्म भारतबाट आएका मुस्लिमहरू एकै ठाउँमा रहेकाले कतिपय नगरवासी डराएको पाइन्छ । कसैमा कोरोनाको आशंका गर्ने खालको लक्षण देखिएको छ ?
मस्लिम धर्मको प्रसारमा इन्डिया पुगेर आएका एक जनाको आरडीटी पोजेटिभ आएको थियो । तर, पीसीआरमा नेगेटिभ देखियो । त्यसबाहेक कुनै यस्तो बिरामी छैन, जसमा कोरोना संक्रमणको आशंका गरौं ।
सप्तरीकै सप्तकोसी नगरपालिकादेखि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले भारतबाट आएका मुस्लिमहरू बसेका मस्जिद केही समयका लागि सिल गरेका छन् । तपाईंहरू त ढुक्कले बस्नुभएको छ नि !
पहिलो कुरा त, कोरोना पुष्टि भएका भारतीय नागरिक यहाँ निकै पहिला नै आएका हुन् । करिब दुई महिना भइसकेको छ । उनीहरूलाई लिएर हामी डराउनुपर्ने अवस्था रहेन । तर, कुनै माध्यमबाट अन्य कुनै कोरोना पेजेटिभसँग सम्पर्कमा आएकाहरू मस्जिदमा बसेका हुन सक्ने कुरालाई म नकार्दिनँ । तपाईंले ठीकै विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । म जिल्लामा कुरा राखेर आवश्यक कदम चाल्छु ।
नगरपालिकामा कति ठाउँ क्वारेन्टाइन तयार गर्नुभएको छ ?
विभिन्न ठाउँमा गरी ५० शैय्या क्षमताका बेड तयार गरिएको छ । अहिले विदेशबाट आएका ४ जनालाई राखिएको छ ।
हिजो राति नै मस्जिद सिल गर्‍यौँ
आशा चौधरी, उपप्रमुख, सप्तकोसी नगरपालिका, सप्तरी
उदयपुरको भुल्के मस्जिदमा कोरोना पुष्टि भएकाहरू तपाईंहरूकै नगरपालिकाभित्र पर्ने विभिन्न मस्जिदमा पस्दै गएका रहेछन्, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
हामीले हिजो रातिदेखि नै १ नम्बर वडामा पर्ने फत्तेपुरको मस्जिद सिल गरेका छौँ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका भारतीय नागरिकहरू सोही मस्जिदमा बसेर गएको बुझिएको छ । छेउछाउका बस्तीका नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छौं । उक्त क्षेत्रलाई निगरानीमा राखेका छौँ ।
सप्तकोसी नगरपालिकाभित्र कति मस्जिद छन् ?
वडा नम्बर १ को फत्तेपुर, २ को सिद्धिपुर र ४ को बलार्ध गरी तीन वटा मस्जिद हाम्रो नगरपालिकाभित्र छन् ।
बाँकी दुई मस्जिदका विषयमा केही निर्णय भएको छ कि छैन ? सुरक्षा र निगरानी त त्यहाँ पनि आवश्यक होला नि !
हामीले पहिला त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न चाहेका छौँ । त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटेर त्यहाँको अवस्था, गतिविधिको विवरण संकलन गर्छौँ । सम्भवतः आजै त्यहाँको विषयमा आवश्यक निर्णय लिने छौँ ।
मस्जिद क्षेत्रका स्थानीयवासी हिजोसम्म तरकारी बेच्न बजारतिर गएका देखिन्थे त !
अत्यावश्यक वस्तु सामाजिक दूरी कायम गरेर खरिदबिक्री गर्न पाइने निर्णय केन्द्र सरकारले नै गरेको हो । तर, आजदेखि हामीले यसमा पनि कडाइ गरेका छौँ ।
सतर्कता अपनाउने कुरा गर्नुभयो, नगरवासीलाई घरभित्रै थुन्ने कि उनीहरूको परीक्षण पनि गर्ने हो ?
परीक्षण पनि गर्छौँ । राजविराजबाट आज स्वास्थ्यकर्मीको टोली आउँदैछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०७७, १३:००:००